Inona no atao hoe Orchestration Marketing? | Martech Zone
Alakamisy, Aprily 23, 2020 Alakamisy, Aprily 23, 2020 Douglas Karr
Sarotra ny mino ny fotoana nanoratako ny bilaogiko, saingy tiako fa matetika aho dia afaka mijery ireo lahatsoratra taloha indraindray. Folo taona lasa izay, nanoratra aho fa ny consultants vaovao dia tena nitovy tokoa mpitarika mozika:
Ireo mpitantana dia tsy voatery mpitendry zavamaneno mahay miaraka amina zavamaneno iray; na izany aza, azon'izy ireo tanteraka ny fomba fampiasana ny zava-maneno tsirairay, ampiarahan'izy ireo miasa, ary anaovany mozika mahafinaritra. Mampalahelo fa tsy niantso ny tenanay ho mpitarika marketing izahay!
Mandrosoa haingana anio, ary orkestra marketing izao dia teny mahazatra ampiasaina hamaritana ny fomba fampiasan'ny mpivarotra medium sy fantsona samihafa hananganana fahatsiarovan-tena sy fifamatorana amin'ireo mpihaino kendreny. Ampiasaina indrindra io teny io rehefa mifanakalo hevitra Marketing mifototra amin'ny kaonty satria ny tanjona kendrena dia fantatra tanteraka ary avy eo misy andiany hetsika miseho hamoahana ny vinavina amin'ny alàlan'ny dia nataon'ny mpanjifa, ka hitarika azy ireo hiova fo.
Toy izao ny famaritan'i Engagio, sehatra marketing-monina orkestra marketing:
Ny orkestra marketing dia fomba iray amin'ny marketing izay tsy mifantoka amin'ny famoahana fampielezan-kevitra irery, fa kosa amin'ny fanatsarana ny andiam-pifandraisana mifamatotra mifampitohy izay, rehefa ampiarahana dia mamorona traikefa ananan'ny mpanjifa manokana.
Ny fametrahana sy ny fanatsarana ny paikady marketing omni-channel dia tsy voafetra ho an'ny orinasa vaovao, azonao atao ihany koa ny manosika hafatra sy doka ho an'ny fivarotana am-baravarana ary hamelombelona ireo fotoana, fanavaozana, na hanomezana fitaovana ho an'ny mpanjifa ho mpisolovava. Notsinjain'i Engagio ho sokajy 5 ny lalao mahazatra:
Marketing Orchestration Marketing
Filalaovana fikasana sy fifamofoana - fomba tsara iray hahazoana antoka fa mahazo tombony betsaka indrindra amin'ny angona angon-drakitra sy ny firaketana ianao, ka io no anarany. Ampiasao izy ireo raha toa ny mpividy mety ho eo amin'ny sehatry ny fikarohana sy ny fikarohana.
Kaonty Qualified Marketing Qualified (MQA) milalao - nampiasaina rehefa nahatratra kaontim-pahombiazana ampy na fifandraisan-davitra ny kaonty mety ho tadiavinao fa ny varotra dia tokony hifaneraserana amin'izy ireo.
Ahintsano ny milalao ny hazo - rehefa nanao resadresaka tamin'ny Sales ianao, nefa lasa maizina izy ireo. Ny famelana ireo fanantenana ireo dia midika famelana ny fifanarahana mety hatao, noho izany dia mendrika ny fiezahana hiditra indray.
Mihazakazaka Milalao - Ny mpanjifa efa misy dia mety amin'ny filalaovana kendrena amin'ny fampitomboana ny salan'isan'ny mpanjifanao. Izy ireo dia mety ahitana fanavaozana, fivarotana an-tsokosoko, upsell ary fanentanana ny mpanjifa.
Mikatona very filalaovana - rehefa vita ny fifanarahana dia afaka manampy anao hahalala izay tsy nety nataonao ireo mba tsy hamerenanao ireo hadisoana ireo ihany amin'ny manaraka. Izy ireo koa dia azo ampiasaina mba hahazoana kaonty avy amin'ny mpifaninana iray.
Orchestration dia zavatra mety hampatahotra, saingy tsy tokony hatao izany - ny fomba fiasa dia mahery sy manan-danja amin'ny marketing automatisation sy ny marketing amin'ny kaonty (ABM).
izany infographic avy any Engagio manazava lafiny samihafa amin'ny fomba mora harahina sy amin'ny fomba hita maso. Misokatra amin'ny fandefasana an'ity ve ianao? Faly i Engagio mandrafitra atiny vitsivitsy hiaraka aminao koa.
Mety ho sarotra ny fananganana orkestra. Engagio koa dia nitondra torolàlana iray izay hampiseho aminao ny fomba fampiasana ireo ekipa misy sy rafitra misy anao mba hahamora sy mahomby kokoa ny ABM. Nampidirin'izy ireo koa ny lalao marketing 18 namboarina izay hampiseho aminao tsy ny fomba fandaminana ny varotrao ihany, fa koa ny fampiasana ny automatisations hanaovana ezaka amin'ny orkestra.
Sintomy ny Orchestration sy ny Generation manaraka ny mandeha ho azy
Tags: varotra miorina amin'ny kaontyorkestra marketingboky milalao orkestra marketingorchestrationmilalao orkestra